Fanorona - Wikipedia
Ny fanorona dia lalaon-tsaina malagasy saingy efa malaza any amin'ny firenena maro maneran-tany.
1 Filalaovana fanorona
Misy karazany maro ny fanorona, fa ny tena maro mpahalala dia ny fanoron-tsivy sy ny fanoron-telo. Toy izao no endriky ny kianja ilalaovana ho an'ny fanoron-tsivy : soritana tsipika 5 mitsivalana sy mirazotra ary tsipika 9 mitsangana sy mirazotra ihany koa izay manome efajoro misy efitrefitra 32. Avy eo dia asiana tsipika iray avy ao anatin'ny efitrefitra tsirairay izay mampitohy ny zorony roa amin'ny efitrefitra, izany hoe tsipika mihorirana ka ampifandimbiasina ho tsipika mianjera mankany aoriana sy mankany aloha izany. Ho an'ny fanoron-telo dia mitovy amin'ny fanoron-tsivy ihany, fa tsipika 3 mitsangana sy tsipika 3 mitsivalana ihany no soritana.
Ny fihaonan'ny tsipika no toerana ametrahana ny vato holalaovina, ary ny ivo indrindra amin'ireo no atao hoe laka.
Amin'ny fiantombohan'ny lalao dia alahatra eo amin'io kianja io ny vaton'ny mpifanandrina izay miisa 22 avy, miloko mainty sy fotsy, ka ny laka ihany no tsy misy vato. Ny tanjona dia ny hanafoana ny vato rehetra ananan'ny mpifanandrina, ka izay mbola manana vato tavela no mpandresy.
Lalao ankafizin'ny Malagasy tokoa ny fanorona. Misy lovan-tsofina mitantara fa nisy mpanjaka anankiray izay namoy ny fanjakany iray manontolo mihitsy noho ny fitiavany an'io lalao io.
Mifandimby manisaka ny vatony amin'ny toerana iray mbola tsy misy vato ny mpifanandrina. Ny fanisahana ny vato anefa dia tsy maintsy manaraka ny tsipika mitsivalana na mitsangana na mihorirana izay efa nosoritana.
Amin'ny fotoana anisahana ny vato dia esorina ny vaton'ny mpifanandrina izay hatonina na isintahana, raha toa ka vaton'ny mpifanandrina no akaiky indrindra ny toerana iharan'ny hetsika atao fa tsy toerana tsy misy vato na toerana misy vaton'ilay manisaka.
Raha toa ka mbola an'ny mpifanandrina ny vato ao ambadik'ilay vatony esorina, dia miala daholo koa izay vaton'ny mpifanandrina mitandahatra amin'iny tsipika iny, mandra-pisy vaton'ilay manisaka na toerana fotsy.
Raha samy misy vaton'ny mpifanandrina ny toerana nihatahana sy ny toerana hatonina, dia misafidy ilay manakisaka na ny eo alohan'ny hisaka no esorina na ny tato ivohony.
Raha mahaisotra vaton'ny mpifanandrina ny hetsika anankiray dia mbola afaka manohy manisaka ny vatony ihany ny mpilalao fa tsy miova ny anjara. Tsy maintsy ilay vato nahisaka ihany no azo akisaka. Tsy azo atao koa ny miverina amin'ny toerana efa nipetrahan'iny vato iny.
Teti-panorona (tetika + fanorona) : milaza tetika maty paika na drafitra nalamina milahadahatra hahatongavana amin'ny tanjona iray. Ohatra: Nanaovana teti-panorona mihitsy ny nisamborana ilay jiolahy raindahiny.
«Ny fanoron-dratsy no miverina an-dalana»
«Homam-be tsy matavy toa fanoron-dratsy»
«Pai-panorona mahalany andro»
((mg)) Tetikasa fanorona iray sahanina Malagasy
((mg)) Tetikasa fanorona vita amin'ny Python sahanina Malagasy
((en)) Tetikasa fanorona hafa sahanina vahiny, applet sy fango Java
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Fanorona&oldid=798286"
Dernière modification le 7 Febroary 2017, à 14:40
Voaova farany tamin'ny 7 Febroary 2017 amin'ny 14:40 ity pejy ity.